Brezila: Lasa mpamono olona mihitsy ny pôlisy breziliana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Desambra 2008 22:17 GMT
Amin'ny fotoana ankalazan'ny manerantany ny Andron'ny Zon'olombelona indrindra no mihiaka manohitra ny fomba mamohehitra ataon'ny polisy niteraka fahafatesana ny mpamaham-bolongana Brezialiana fa tsimatimanota ry zalahy any Rio de Janeiro.
Nilaza ny mpamaham-bolongana ao amin'ny My little corner of the world [pt] fa nankaloiloy azy ny didim-pitsarana ary nomarihiny ihany koa ny filazany fa raha voambana basy manodidina ny fiarany dia nanipy kitapon-jaza iray avy eo amin'ny varavarankely izy hilzany fa misy zazakely ao anaty fiara:
Fernanda Freitas [pt] no mitena fa maharary [nymahita an'i] Willian de Paula afaka. “Ahoana no hiafarantsika?”, hoy izy nanontany:
Mpamaham-bolongana iray hafa antsoina hoe Fernanda, avy amin'ny Esse meu Palco [pt], no nahamarika fahadisoana iray lehibe nataon'ny polisy nanafangaro ny antsoina hoe Fiat Palio amin'ny Fiat Stilo:
Renato Vargens [pt] no nilaza fa miatrika ny fotoana iray mangidy indrindra nandritra izay 40 taona farafahakeliny ny mponin'i Rio de Janeiro, Mihevitra fa efa fitsipika mahazatra ny famonoana olona ny heloka bevava – ary ny tsimatimanota – . Izany no mahatonga ireo mpitsara ireo nanafaka ilay polisy:
Maurício Baccarin [pt] koa mba lasan'eritreritra tamin'izay tao an-dohan'ireo mpitsara ireo tamin'ilay fanaahan-keviny ary dia tonga tamina tsoakevitra hafa:
Mahatsiaro i Reinaldo Cintra [pt] fa tsy sambany akory no tsimatimanota eo ampanonoana olona tsy manantsiny thaka izao ny polisy tamin'ity taona ity, ary melohiny ny firaisana tsikombakomba noho izany. Ary amin'ny fotoana fankalazana tahaka izao:
Na Boca Mole [pt] bolongana no nampiseho lahatsarina mpivady iray very zanakalahy tamina toe-javatra sahala amin'izao indrindra, ary nisy sehatra hita ihany koa nandritra ny fotoam-pifitirana azon'ny CCTV. Manontany izy:
Paulino [pt] koa mitovy fisainana tahaka izany:
Fa amin'ny mpamaham-bolongana falyamin'ny didim-pitsarana kosa dia misy ireo polisy to an'i Aderivaldo Martins Cardoso [pt], izay miteny fa nanjaka ny rariny eto Brezila:
Mônica [pt], polisy hafa indray, milaza fa manaporofo ny fisian'Andriamanitra ny didim-pitsarana tahaka izao. Tsikerainy ny manampahefana ao amin'ny polisy izay manameloka tranga tahaka izao avy amin'ny teniny ihany:
Ary i Eduardo Ritter [pt] kosa dia mampitaha ny toe-draharaha mpitranga any Brezila, ahitana ny polisyzatra ny mitifitra aloha vao manontany avy eo, amin'izay nitranga tany Gresy, izay nahitana tranga tahaka izao ka nahatoonga ny firenena manontolo hanohitra. Niteny ary izy fa ny olana fototry ny polisy dia ny karamany ambany loatraj, ka nitarhany ny olona hanontany hoe raha mahazo “ R$ 600 [tokotokony ho US$ 250] ianao hamelomana fianakaviana, iza amin'ireo polisy ireo ary no tsy mandray kolikoly?”:
Ankehitriny,dia mivadika [amin'ny eto] ny mitranga any. Mandoa hetra ny olona any, tsara karama ny polisy, ary raha mahafaty sivily ny polisy, tsy ilay polisy voampanga ihany no toheriny, fa ny sampana-draharaha iray manontolo mihitsy, izay tsara orina saingy nandamoka! NIsy revolisiona tany noho ny vono olona iray nataona polisy. Manara-dalàna ny polisy any. Fa eto kosa, mifanala azy amin'ny dihin'ny parakeet ny polisy, saiky ny ankamaroan'ny vaovao lehibe rehetra no mandefa ny fanoherana any Gresy nefa thaka ny miteny hoe: “Ary izany voina sy gidragidra rehetra izany dia nisy noho ny famonoana polisy iray sivily iray? Fratratra loatra.”